BancaNEO - एउटा एप, सबै कुरा पैसा
तपाईंको स्मार्टफोनमा वास्तविक बैंक
डिजिटल बैंकिङ सरल बनाइयो
कुनै आय वा जम्मा आवश्यकताहरू बिना, BancaNEO सबैको बैंक खाता हो। एउटा खाता, एउटा कार्ड, एउटा एप।
व्यक्तिगत खाता खोल्नुहोस्
व्यापार खाता खोल्नुहोस्
व्यक्तिगत र व्यापार बैंकिङ, आफ्नो औंलामा
सजिलो र भरपर्दो
3d सुरक्षित र 2FA प्रयोग गरी कोष सुरक्षा
व्यवसाय वा निजी खाताको लागि आवेदन दिनुहोस्
इन-एपमा कार्डहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्, केवल एक ट्याप
कुनै आय वा जम्मा आवश्यकताहरू
आफ्नो हातमा पैसा राख्नुहोस्
आफ्नो पैसा सबै एकै ठाउँमा ट्र्याक गर्नुहोस् र आफ्नो दैनिक खर्च निर्बाध बनाउनुहोस्।
आफ्नो व्यक्तिगत खाता खोल्नुहोस्
नयाँ प्रकारको बैंक
सरल र स्मार्ट बैंकिङ अनलाइन को शक्ति अन्वेषण गर्नुहोस्।
एउटा कार्ड छान्नुहोस्
द्रुत मुद्रा विनिमय
यो सधैं जस्तै सजिलो छ!
कसरी सुरु हुन्छ
तपाई को हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई बताएर खाता सिर्जना गर्नुहोस्;
एप्पल एप स्टोर वा गुगल प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्नुहोस्;
छोटो सेल्फी भिडियो रेकर्ड गरेर र आफ्नो आईडीको फोटो खिचेर तपाईं को हुनुहुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्।
आफ्नो पैसा खर्च राम्रो बुझ्नुहोस्
सहज मोबाइल ईन्टरफेस	तपाईंको औंलाको ट्यापको साथ तपाईंको वित्तीय अपरेसनहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् र ट्र्याक गर्नुहोस्, २//24।
बहु-मुद्रा IBAN	तपाइँसँग जोडिएको BancaNEO खाताले तपाईंलाई 38 मुद्राहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लेनदेन गर्न अनुमति दिन्छ, तिनीहरू मध्ये प्रत्येकको लागि छुट्टै खाताहरू नखोली।
सजिलो र भरपर्दो	तपाईंको पैसा सुरक्षित राख्न स्मार्ट सुरक्षा सुविधाहरू। हामी तपाईंको पैसा र व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्न उच्चतम EMI सुरक्षा मापदण्डहरूको पालना गर्छौं।
अद्भुत र मैत्री समर्थन
होइन, सिलिकन भ्याली - बगहरू सुविधाहरू होइनन्। प्राविधिक समस्या बारे सम्पर्क गर्नुहोस्, आफ्नो प्रतिक्रिया साझा गर्नुहोस् वा मियामीमा हाम्रो मनपर्ने खाजा स्थानको बारेमा हामीलाई सोध्नुहोस्। हामी यहाँ छौं जे भए पनि।
मानिसहरूले हामीलाई माया गर्छन्!
हाम्रा ग्राहकहरूको सफलता कथाहरू हेर्नुहोस्
सम्झौता गर्नको लागि उत्कृष्ट अन्त बैंक। सबै कर्मचारी धेरै पेशेवर र जानकार छन्। तिनीहरूको अनलाइन बैंकिङ अनुभव सजिलो र अनुकूल छ।
मा ग्राहक सेवा टोलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद BancaNEO यो प्रक्रिया सजिलो बनाउन को लागी!
मा ग्राहक सेवा द्वारा प्रदान गरिएको सहयोगबाट म धेरै प्रभावित छु BancaNEO!
जब मसँग प्रश्न छ वा थप मद्दत चाहिन्छ, म कसैसँग सम्पर्कमा रहन र छिट्टै जवाफ प्राप्त गर्न सक्षम छु। मसँग यो हप्ता विशेष सकारात्मक अनुभव थियो र साझा गर्न चाहन्छु।
अज्ञात- शुभ ग्राहक
तपाईं किनमेल गर्दा पुन: सृष्टि गर्नुहोस्!
खोलिएको प्रत्येक बैंक खाताको लागि, BancaNEO रूख रोप्नुहोस्
हरेक लेनदेनलाई सकारात्मक कार्यमा बदल्नुहोस्
हामी विश्वभरका प्रमुख पुनरुत्थान साझेदारहरूसँग काम गर्छौं
BancaNEO ट्री-नेसनसँग काम गर्नुहोस् जुन 90 विभिन्न देशहरूबाट 33 रोपण परियोजनाहरूको घर हो।
केन्यामा १ 184 673। रूखहरू रोपे
मादागास्करमा planted२ 42 336 रूखहरू रोपे
बुर्किना फासोमा १163 710१० रूखहरू रोपे
कोलम्बियामा 47 485 Col XNUMX रूखहरू रोपे
तपाईंलाई सूचित राख्नको लागि स्रोतहरू
को पढ्न BancaNEO ब्लग
हाम्रा साझेदार र एकीकरण
40% सम्म क्यासब्याक
NEO सर्कलमा सामेल हुनुहोस्
आज आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुहोस्।
अहिले नै NEO सर्कलमा सामेल हुनुहोस्!